देश फरक होला तर कर्म संगीतमै छ – गायक मोहन भुषाल : page3nepal.com
March 26, 2018 Filed under पेज३नेपाल अपडेट Please Subscribe our Youtube Channel
भक्तपुरको सल्लाघारीमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ५० को दशकमा निकैनै लोकप्रिय रहेका गायक मोहन भुषाल हाल परिबार सहित बसाई सरेर अमेरिकामा रहेका छन् । सोसियल प्लाटफर्म पनी न्यून झै रहेको अबस्थामा उनी संग सम्पर्क बिहिन झै भएको थियो नेपाली मिडिया । पछिल्लो समय चर्चित बनेको फेशबुक प्लाटफर्म मार्फत उनी आफ्ना प्रसम्सकहरु संग जोडिन पुगेका छन् । धेरैको एउटै प्रश्न पढ्न र सुन्न पाइन्छ दाइ अचेल के गर्दै हुनु हुन्छ, सांगीतिक क्षेत्रमा ?
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा डिभी परेर होस् या सांगीतिका कार्यक्रमको शिलशिलामा अमेरिका पुगेर स्थाइ बसोबास गर्ने नै किन नहुन् ! नेपाली कलाकारहरुको अमेरिकामा उपस्थिती ज्यादैनै रहेको छ । गायक भुषाल भने डिभी मार्फत आफ्नो परिबार सहित अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । पेज३नेपाल ले पनी गायक मोहन भुषाललाई सोसियल साइट फेसबुक बाटै पुन: भेटको हो । फेसबुक च्याटको क्रममा गायक भुषालले केही समय अगाडी पनी नेपाल आएर आफ्नो एल्बम बजारमा सार्बजनिक गरेको बताएका छन् ।
जति हेर्यो उती हेरौ लाग्ने तिम्रो आँखा, नलेख चिठ्ठी , मेरो माया छोडी आए जस्ता हिट गीत नेपाली सांगीतिक पारखीहरुको का निम्ति नौलो होइन । बरिष्ठ देखी कनिष्ठ श्रोताहरुको पनी रोजाइमा परेको यस गीतका स्रष्टा मोहन हाल अमेरिका रहि अनुराग संगीत पाठशाला मार्फत नेपाली संगीत सिक्न चाहनेहरुका लागी कक्षा समेत संञ्चालन गरि रहेका छन् । हाल उनको संगीत बिधालयमा बिधार्थीहरुले नेपाली गीत र नेपाली राष्ट्रिय गान लगायत पुरै बिदेशी पृष्ठभूमीमा जन्मेका हुर्केका नेपालीहरुलाई नेपाली संगीतको ज्ञान दिइ रहेका छन् । अमेरिका देश ब्यस्त जिबन शैली तर पनी नेपाली अभिभाबकहरुले आफ्ना सन्तानलाई नेपाली राष्ट्रगान र गीत संगीत को ज्ञान आफ्ना सन्ततीलाई दिलाउन जुन रुपमा आफ्नो पाठशालामा पठाउने गर्नु भएको छ त्यस प्रति उनी गर्व महशुष गर्दछन् ।
बिदेशमा रहँदा नेपालको जस्तो सजिलो साँच्चिकै नरहेको बताउदै फुर्सदको समयमा संगीतमै समय बित्ने र नेपाल र नेपालीलाई अनलाईनको माध्यम बाट नियाल्ने कार्य गर्ने गरेको उनी बताउछन् । सन्चारले यत्रो फड्को मारिसक्यो अब कोही पनी नजिक टाढा नरहने बताउदै नेपाली सञ्चार जगतले सम्झेर सम्पर्क गर्न खोजे गार्हो नरहेको बताउछन् । पछिल्लो समय नेपाल आएर फर्कदा आफ्नो अधिकांश समय मिडिया माथी खर्चन पाउदा खुशी समेत प्रकट गरेका छन् । नेपाली यत्रा मिडियाहरु खुलि सक्दा पनी आफू बिदेशमा रहेका बेलामा प्रबिधी प्रयोग गरेर सम्पर्क चाहि नभएको उनको गुनासो रहेको छ ।
नेपालमा रहे पनी नरहे पनी नेपाली श्रोता,दर्शक,पाठकहरु सदैब आफ्नो मनमा रहने गरेको बताउदै मोहनले आगामी दिनहरुमा बर्षमा एक नयाँ गीतको श्रब्य दृष्य आफ्ना शुभचिन्तकहरुका लागी सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।